फेरि टिकटकमा भाइरल हुदै यो जुम्ल्याहा जोडी, अरूको भन्दा फरक प्रतिभाकै कारण चर्चामा (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > फेरि टिकटकमा भाइरल हुदै यो जुम्ल्याहा जोडी, अरूको भन्दा फरक प्रतिभाकै कारण चर्चामा (हेर्नुस् भिडियो)
फेरि टिकटकमा भाइरल हुदै यो जुम्ल्याहा जोडी, अरूको भन्दा फरक प्रतिभाकै कारण चर्चामा (हेर्नुस् भिडियो)
admin February 12, 2021 February 12, 2021 जीवनशैली, भिडियो, मनोरञ्जन	0
टिकटवाट भाइरल भएका धेरै जोडी अहिले कलाकार बनिसकेका छन् । उनीहरुले फिल्म र म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकले कलाकार बनेकाहरुले राम्रो अवसर पाएका छन् । प्रिन्साको जोडी, दमयन्तीको जोडी र अर्का दुई दाजुभाईको जोडी पछि अर्को एक दिदी बहिनी पनि भाइरल भएका छन् ।
यि पनि जुम्ल्याहा जोडी हुन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनीहरु पनि सकृय छन् । जुम्ल्याहा जोडीहरु भाइरल भएका बेलामा यो जोडीले भने कस्तो प्रभाव पार्छ ? हेर्न भने बाँकी छ । उनीहरु पनि अहिले आफुहरुलाई उनीहरु जस्तै प्रस्तुत गर्ने अवसरको खोजीमा छन् । उनीहरुको अर्को विशेषता भनेको उनीहरुले गीत पनि राम्रो गाउँछन् । श्वर पनि ठिकै छ । त्यसैले गीत गाउने प्रयास पनि गर्छन ।
उनीहरु पनि टिकटकमा चर्चामा रहेका गंगा जमुना हुन् । उनीहरुले समान लुगा लाउँछन् । भनिन्छ जुम्ल्याहा मध्य एक जनालाई कुनै समस्या भयो भने अर्कोलाई पनि त्यस्तै समस्या हुन्छ ? यो प्रश्न गर्दा उनीहरुले आफुहरुबीचको रमाइलो कुरा सुनाए । दुई तीन मिनेटको फरकमा जन्मिएका उनीहरुको स्वभाव पनि उस्तै छ । उनीहरुको टिकटक फलोअर्स ३० हजार भन्दा माथि छ । ब्यक्तिगत र सामुहिक टिकटक पनि उनीहरुले बनाएका छन् ।
दुवै जनाले संगै र फरक फरक पनि टिकटक एकाउण्ट बनाएका उनीहरुले लोक र आधुनिक गीत गाउँछन् । भन्छन्, एक जनालाई टाउको दुख्दा अर्कोलाई पनि दुख्ने रहेछ । हामीले पनि अनुभव गरेका छन् । उनीहरु आफैले गीत रचना पनि गर्छन ।
टिप्पर हो की यमराज ! एउटै मोटरसाइकलमा सवार पत्निलाई सडकमै घाइते छोडेर सदाका लागि अस्ताए श्रीमान्!
दिनेश त्रिपाठी र ऐन महरबीच ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लिएर मुख छोडाछोडपछि झडप, धमलाले यसरी गरे अन्त्य – भिडियो सहित
अति मार्मिक : ममी हाम्रो भात किन पाक्दैन ? एकपटक अवस्य हेर्नुहाेस् (भिडियो सहित)